HomeApril 11, 2019
Karachi, Pak Datacom Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 18, 2019 at Islamabad. The agenda of the meeting will to consider the 3rd Quarter Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company ...
Karachi, Din Textile Mills Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 18, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the compan ...
Karachi, Archroma Pakistan Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 29, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Half Yearly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the comp ...
Karachi, AWT Investments Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 18, 2019 at Rawalpindi. The agenda of the meeting will to consider and approve interim financial statements of the funds for the period ended Mar ...
Karachi, First Al-Noor Modaraba informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 20, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company h ...
Karachi, The Searle Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 18, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the compa ...